Ihe mgbu olu na-enye gị nsogbu? Ka anyị chọta azịza! – Noor Health Life
Ihe mgbu olu na-enye gị nsogbu? Ka anyị chọta azịza!
N’olu na azụ anyị bụ obere akara ndị yiri ọkpụkpụ azụ anyị. Mgbu olu nwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya bụ nsogbu a na-ahụkarị. Ọtụtụ n’ime anyị na-akpa àgwà azụ ma a bịa n’ise foto banyere onwe anyị. Nke a bụ ụfọdụ n’ime ihe kpatara ya: Noor Health Life na-arụ ọrụ gị mgbe niile. Naanị kwado Noor Health Life ma nyere Noor Health Life aka n’inyere ndị ogbenye aka.
Ka anyị gụkwuo.
* Nchegbu na nchekasị
غلط ezighị ezi ọnọdụ nke ụra olu
● Ọnọdụ na-ezighi ezi
* Ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ahụ ike
* Ọrịa maningitis
* N’ọrịa a, enwere mbufụt na akpụkpọ ahụ gburugburu ụbụrụ na cerebellum na enwere mgbaàmà dịka isi ọwụwa, ahụ ọkụ na isi ike n’olu.
* Obi nkolopu
Ọrịa obi nwekwara ike ịpụta na mgbu a mana ọ na-esonyere ya na mgbaàmà ndị ọzọ dị ka ọsụsọ, ọsụsọ, ọgbụgbọ, ike iku ume na mgbu na agba.
Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe na-ebute mgbu olu:
● Mbufụt – dịka ọmụmaatụ na-emechi spondylitis
Ihe mgbaàmà a na-ahụkarị nke nsogbu olu bụ:
* Mgbu na esemokwu: Ụdị isi ọwụwa a na-akawanye njọ site n’itinye isi n’otu ọnọdụ ruo ogologo oge.
* Ọkpụkpọ olu ma ọ bụ agịga na-arapara n’ime: Nke a bụ n’ihi nrụgide na akwara nke nwere ike ime ruo n’ogwe aka.
● Ụda ịpị ma ọ bụ mmetụta mkpọtụ: A na-akpọ ụda a na-akpụ akpụ n’ihe gbasara ahụike, ọ na-esitekwa n’ịhịa uru ahụ na ọkpụkpụ n’elu ibe ha. A na-ahụkarị mgbaàmà a n’abalị.
* Dizziness na nkụda mmụọ: Nrụgide na akwara vertebral nwere ike ịkpata nkụda mmụọ na isi ọwụwa.
* Nsogbu akwara: Mmetụta a na-ebute site na isi ike na mọzụlụ.
Na-emeso olu gị n’ụlọ
Ọ bụghị nnukwu nsogbu na-akpata mgbu olu na-emekarị n’ime izu 4 ruo 6. Mmega ahụ ndị a nwere ike inye aka:
● Ntụgharị dị mma:
Tụgharịa isi gị n’otu akụkụ ruo mgbe mọzụlụ malitere ịma jijiji wee nọrọ n’ọnọdụ ahụ maka 5 sekọnd wee megharịa otu usoro ahụ n’akụkụ nke ọzọ.
● Nick gbadaa ala:
Jiri nwayọọ gbadaa olu gị n’obi gị wee hapụ ya n’ọnọdụ ahụ maka oge ole na ole ma megharịa usoro a ọtụtụ ugboro.
Kwuo isi gị n’otu ubu ruo mgbe ọ dị ogologo ma debe isi ya n’otu ọnọdụ maka 5 sekọnd wee megharịa otu usoro ahụ n’akụkụ nke ọzọ.
● Mgbatị dị mma:
Gbatịa mọzụlụ gị site na ịkwanye úkwù gị azụ wee nọrọ n’ọnọdụ ahụ maka 5 sekọnd ma megharịa usoro a ugboro ise.
Ọgwụgwọ isi ike olu:
● Mkpọ ọkụ ma ọ bụ ice:
Ngwunye ice nke nkeji iri abụọ nwere ike ibelata mbufụt nke ukwuu. N’otu aka ahụ, ị ​​​​na-adị jụụ ọbụna mgbe ị na-asa ahụ na mmiri ọkụ.
Nweta ịhịa aka n’ahụ:
Ịhịa aka n’ahụ sitere n’aka ọkachamara nwekwara ike na-atụrụ ndụ nke ukwuu.
Jiri ọgwụ OTC mee ihe.
N’ime usoro a, a na-etinye ezigbo agịga n’ụdị nrụgide dị iche iche nke akwara anyị, nke na-eme ka mmadụ nwee mmetụta dị iche iche nke ukwuu.
Ha nwere ike ịgwọ akwara na nkwonkwo n’ụzọ a kapịrị ọnụ, mana ọ dị mkpa ibu ụzọ kpọtụrụ dọkịta.
Nchegbu nwekwara ike ịkpata mgbaka olu, yabụ soro na-eme ihe ga-ebelata mgbakasị ahụ gị.
Meziwanye ọnọdụ ihi ụra gị:
* Họrọ akwa akwa dị mma
سو Were isi gị elu ma ọ bụ azụ gị elu
* Jiri ohiri isi pụrụ iche maka olu
* Mee ka ahụ gị dị jụụ tupu ị lakpuo ụra
A na-agwọkarị mgbu olu site na usoro ndị a mana ọ bụrụ na ọ na-egbu oge, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta gị, mgbu ubu dị na mọzụlụ, ọkpụkpụ ma ọ bụ gburugburu ha, ọ bụrụ na mgbu a amalite mgbe ahụ onye ọ na-esiri ike ịrụ ọrụ ahụ nke ọma. Ndị mmadụ nọ n’afọ ndụ niile na-enwe mgbu ubu, ndị na-eji laptọọpụ, mbadamba ma ọ bụ smartphone ogologo oge na-enwekarị nsogbu a. Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata mgbu ubu, ihe kachasị akpata nwere ike ịbụ anụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ihe ndị ọzọ na-akpata mgbu gụnyere ọrịa nkwonkwo, ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ịtọpụ akara ma ọ bụ oyi nke ubu. Ọrịa nke nchichi olu, obi, imeju na akwụkwọ na-ebutekwa mgbu ubu. Mgbaàmà nke mgbu gụnyere ọzịza na ihe isi ike ịkwaga ubu. Ị nwekwara ike ịgwọ obere ihe mgbu n’ụlọ, ọ bụrụ na mgbu ahụ dị njọ, ị ga-agakwuru dọkịta.
Ọgwụgwọ ụlọ maka mgbu ubu
Igwe dị jụụ
Ọrịa oyi dị mma maka mgbu ubu. A na-anụ ọnyá oyi na mpaghara emetụtara nke na-ebelata iwe na ahụ erughị ala.
. Tinye ice cubes n’ime akpa rọba ma kechie ya na akwa nhicha dị mkpa.
Hapụ na mpaghara ahụ emetụtara maka nkeji iri ruo iri na ise.
Mee ya ọtụtụ ugboro n’ụbọchị.
A pụkwara ime ihicha site n’itinye akwa nhicha na mmiri oyi.
Ski na-ekpo ọkụ na-abakwa uru n’ịgwọ mgbu. Na-enyere aka ibelata mgbu, mgbakasị ahụ na ọzịza. Ọ kacha mma ịme ski na-ekpo ọkụ 2 awa mgbe mmerụ ahụ gasịrị. Igwe na-ekpo ọkụ na-abakwa uru n’ịgbatị akwara.
. Jupụta akpa mmiri ọkụ na mmiri ọkụ wee fesaa ubu. Iji mee nke a, dina ala nke ọma na ski ọtụtụ ugboro n’ụbọchị maka nkeji iri ruo iri na ise.
Werekwa mmiri ịsa ahụ dị ọkụ ma tinye mmiri maka nkeji ise ruo iri. Bilie ọtọ ka ị na-awụsa mmiri. Mee nke a ugboro abụọ n’ụbọchị.
Nrụgide pụtara ịkwanye akụkụ ahụ na-egbu mgbu. Nke na-ebelata ọzịza. Ihe bandeeji na-enye ọtụtụ nkwado na nkasi obi n’ubu.
Ị nwere ike iji bandeeji na-ekpo ọkụ tinye nrụgide n’ebe ahụ ọ metụtara, debe bandeeji ahụ n’ebe ahụ emetụtara ruo ụbọchị ole na ole iji belata mgbu na ọzịza. Debe ubu gị n’elu ohiri isi ka ị zuru ike.
Ejikọtala bandeeji ahụ nke ọma ka o nwee mmetụta na-erugharị ọbara.
Epsom nnu sitere na magnesium sulfate. Na-ebelata mgbu. Na-eme ka mgbasa ọbara dịkwuo mma ma na-ebelata ahụ ike nke anụ ahụ.
Jupụta mmiri dị ṅara ṅara ma ọ bụ nke na-adịchaghị ọkụ juputara na bat ahụ.
Tinye iko abụọ nke nnu Epsom wee gbazee.
. Nọdụ ala na mmiri a ma tinye ubu gị n’ime mmiri maka nkeji iri abụọ ruo iri abụọ na ise.
Mee ya ụbọchị atọ n’izu.
Ịhịa aka n’ahụ
Ịhịa aka n’ahụ na-ebelatakwa mgbu ubu. Ịhịa aka n’ahụ ọkụ na-enyere aka ibelata esemokwu akwara. Na mgbakwunye, ọ na-ebelata ọzịza na isi ike site n’ịbawanye mgbasa ọbara. Nweta ịhịa aka n’ahụ site n’aka onye nwere ike ịme ezigbo ịhịa aka n’ahụ. Ị nwere ike iji oliv, sesame ma ọ bụ mọstad mmanụ maka ịhịa aka n’ahụ.
Ọ bụrụ na ọ na-ewute ịhịa aka n’ahụ, emela ịhịa aka n’ahụ.
Mee tapawa site n’ịgwakọta ngaji abụọ nke turmeric na otu ngaji ma ọ bụ karịa nke mmanụ aki oyibo. Kwe ka tapawa ahụ kpoo na mpaghara emetụtara. Jiri mmiri dị nro sachaa. Mee nke a ugboro abụọ n’ụbọchị.
. Gwakọta otu ngaji turmeric n’otu iko mmiri ara ehi wee sie ya. Tinye mmanụ aṅụ na ụtọ. Na-aṅụ ugboro abụọ n’ụbọchị.
Apple cider mmanya
Gwakọta iko abụọ nke apụl cider mmanya dị ọcha n’ime mmiri ịsa ahụ na-ekpo ọkụ.
Tinye ubu n’ime mmiri a maka nkeji iri abụọ ruo iri atọ. Mee nke a otu ugboro n’ụbọchị.
I nwekwara ike ịgwakọta otu teaspoon mmanya mmanya na ntakịrị mmanụ aṅụ na otu iko mmiri ọkụ ma na-aṅụ ya ugboro abụọ n’ụbọchị.
Na-aṅụ iko tii ginger abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị.
Iji mee tii, sie otu tablespoon nke ginger nke ọma na otu na ọkara na iko abụọ nke mmiri maka nkeji iri.
Ntuziaka ndị ọzọ
Wetuo obi na mpaghara ahụ emetụtara dịka o kwere mee.
Mgbe ị dinara ala, dabere n’ubu ma debe crotch.
Mee mgbatị ahụ dị mfe iji kwagharịa mpaghara ahụ emetụtara.
Gwakọta lemon na mmiri dị nro ma na-aṅụ ya ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị ka mineral ghara ịgbakọba na nkwonkwo ka ọ na-ebute mgbu.
Aṅụla sịga ma ọ bụ ise siga n’ihi na ọ na-egbochi ọgwụgwọ ọnya. Ị nwere ike email na WhatsApp na Noor Health Life iji nweta ajụjụ na azịza ndị ọzọ. noormedlife@gmail.com